Myanmar will join India in producing Kovis vaccine
According to Indian media reports, Myanmar will be involved in the production and distribution of the vaccine. India, Myanmar co-develop Kovis-19 vaccine The Indian Foreign Minister said duringavisit to Burma that the two countries should cooperate in the...
မြန်မာစစ်တပ်ကသိမ်းယူထားတဲ့ အာဏာကို ချက်ချင်းစွန့်လွှတ်ဖို့နဲ့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ အမေရိကန်သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒင်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စစ်တပ်ရဲ့ အာဏာသိမ်းယူမှု၊ အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အရပ်သားတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာမှုတို့ဟာ နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုနဲ့ ဥပဒေစိုးမိုးမှုကို တိုက်ရိုက်ကျူးလွန်တိုက်ခိုက်တာလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်တစ်ရပ်မှာ အင်အားကိုအသုံးပြုပြီး နိုင်ငံသားတို့ရဲ့ဆန္ဒကို ပယ်ဖျက်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် အများယုံကြည်လက်ခံတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ပယ်ဖျက်ဖို့ မလုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်းလည်း သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒင်က ပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာ ရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပနိုင်ဖို့၊ အရပ်သားအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့နဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာအာဏာလွှဲပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးအတွင်း တစ်စိုက်မတ်မတ် ကြိုးပမ်းအားထုတ်လာခဲ့ကြတဲ့ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်လာမှုတို့ကို တန်ဖိုးထားလေးစားသင့်တယ်လို့...
အာဏာသိမ်းတာကို လက်မခံလို့ ရာထူးက နုတ်ထွက်လိုက်တဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦး
ကျွန်တော်သည်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ထဲ၌ နှစ်(၂၀)တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးနုတ်ထွက်လာသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ဆောင်ရွက်နေကြရမှု့အားလုံးကိုလည်း သိရှိပါသည် ကိုယ်ချင်းစာပါသည်။ဒီမတရားမှုကို လိုက်ပါ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြရသောရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခက်ခဲပင်ပန်းမှု့ကိုလည်းနားလည်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုအများစုသည်ယခု မတရားအာဏာသိမ်းမှု့ကိုလုံးဝဆန့်ကျင်နေကြပြီဖြစ်ရယမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်လည်းမိုးကျရွှေကိုများ၏မတရား မှု့များကိုကိုယ်တိုင်သိမြင်ခံစားနေကြရလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်သူများ၏သောကကို ကူညီပေးနိုင်ကြရန်အတွက်လည်ကောင်း မိမိတို့၏ မတရားဖိနိပ်မှု့ကို တွန်လှန်ရန်အတွက်လည်ကောင်းယခုအာဏာသိမ်မှု့လုပ်ငန်းစဉ်များထဲသို့လိုက်ပါခြင်းမပြုကြဘဲ ဝိုင်းဝန်း ဆန့်ကျင်ပေးကြပါရန် (အာဏာသိမ်းတာကိုဆန့်ကျင်ခြင်းကြောင့် ရာထူးအာဏာပြုတ်ခဲ့လျှင်တောင် နိုင်ငံနှင့်ပြည်သူကိုကယ်တင်ခဲ့ကြသောရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုသည့်ဂုဏ်နှင့် သမိုင်းသစ်ကို ရေးထိုးနိုငိကြပါမည်။ ပြည်သူကိုကူညီနိုင်သော “ရဲ” ဆိုသည့်ဂုဏ်ကိုမြှင့်တင်ကြကာပြည်သူ့သွေးသားစစ်စစ်ဖြစ်ကြောင်းပြသပေးကြပါခင်ဗျာ။
ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ video တွေကနေတဆင့် ကိုရီးယားဘာသာ စကားကို သင်ကြားပေးနေတဲ့ မြန်မာလူမျိုး ကိုရီးယားဘာသာစကား ဆရာမလေး ချမ်းချမ်း(ချမ်းမြမြသော်)ကတော့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေစဉ်မှာ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ ရုပ်သံအစီအစဉ်တစ်ခုမှာပါဝင်ပြီး လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကို တစ်ကမ္ဘာလုံးသိအောင် သတင်းစကားပါးခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်မ ဒီနေရာကနေ မြန်မာပြည်သူလူထုကိုယ်စား သူတို့ရဲ့ စကားသွတွေကို တဆင့်ပြောပေးချင်ပါတယ်။လက်ရှိ ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ စစ်တပ်ကကြေငြာထားတဲ့ အရေးပေါ်အခြေအနေဆိုတာ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒလုံးဝမဟုတ်ကြောင်း အရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ တစ်နှစ်အရေးပေါ်အခြေအနေ ( အာဏာသိမ်းမှု ) ဆိုတာ လုံးဝ အတည်ပြုလိုက်လို့မရပါဘူး။ ဒီဟာကို သေချာပေါက်ပြန်ရုတ်သိမ်းပေးမှာ...
မမှီဘူး မမှီဘူး ခင်ဗျားတို့ အရင် အနုပညာရှင်တွေ စိတ်ဓာတ်ကို နဲနဲလေးမှ မမှီဘူး
အခုအချိန် ခင်ဗျားတို့ အနေ နဲ့ သူတို့ ခေတ်ကလို သေနတ်တေ့ခံ ရှေ့တန်းထွက်နေရတာတောင် မဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူ နဲ့ အတူ ရပ်တည်ပါတယ် ဆိုတဲ့ စာတစ်ကြောင်း တင်ဖို့တောင် ခင်ဗျားတို့ သတ္တိကြောင်လွန်းတယ်.. ဟိုးခေတ်က အနုပညာရှင်တွေ မီဒီယာတွေ သွေး အင်မတန် ရဲခဲ့တယ်.. တခြား မပြောနဲ့ ထိန်းထားခံရလို့ပါဆိုပြီး ခုခေတ် မီဒီယာတွေက ဆယ်လီတယောက် ဖင်လှုပ်ရင်တောင် သတင်းကောက်ရေးနေတဲ့ မီဒီယာတွေ ခင်များဆို့ သွေး နဲ လွန်းတယ်.. အရင် ခေတ်က နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာဆိုတဲ့...
Korea-Myanmar industrial zone project set to begin in December, creating about 100,000 jobs for Myanmar citizens
Officials from the two countries held the first video conference yesterday to discuss the Korea-Myanmar industrial zone project, which is scheduled to begin in December 2020. Hlegu Township, Yangon Ministry of Construction on 558 acres of land in Nyaung Nyebin...